Thursday May 21, 2020 - 19:51:21 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Ilaah ha unaxriistee waxaa dhowaan lagu aasey magaalada Baydhabo Sh. Aadan Xasan Mukhtaar ( Sh. Towfiiq) wuxuu dhashey 1943/2020 wuxuuna ku dhashey Magaalda ama Tuulada Mubaarak oo Bakool ka tirsan sida aanu kazoo xiganeyy Xildhibaan Idiris Abdi Dh
Ilaah ha unaxriistee waxaa dhowaan lagu aasey magaalada Baydhabo Sh. Aadan Xasan Mukhtaar ( Sh. Towfiiq) wuxuu dhashey 1943/2020 wuxuuna ku dhashey Magaalda ama Tuulada Mubaarak oo Bakool ka tirsan sida aanu kazoo xiganeyy Xildhibaan Idiris Abdi Dhaqtar , wuxuuna ifka uga tagey 21 Caruur ah oo isugu jira wiilal iyo Gabdho iyo wixii ay dhaleen wixii ay sii dhaleen.
Allaha unaxriistee Sh. Toffiiq wuxuu ahaa Geesi aan Gabanin run sheeg ah , shababa, dowlad, iyo shacab intaba iskumid ahaa run usheegida, wixiina ahaa qof ahlu beyd ah wuxuu ku xirnaa Masjidka Jaamaca , mararka qaarna Dabaqeynta baydhabo.
Masaajidada Baydhabo intooda badan wuxuu ka aqrin jirey Kitaabo dhowr ah, hadalkiisa ugu dambeeyey ee reer KGS lahadlaya wuxuu ahaa kii mamaulka ay isku khilaafeen oo DID uyeertey asagoo leh ilaahow maamul dadkaan wax utaraya noo keen kan maamul ma ahanee.
Manta wallow uu dardaarmey in lagu aaso Biyooley oo waalidintiisa ay ku aasan yihiin ayaa sababo daruufo awgeed ay u suuroobi weysey in halkaa loo qaado, wuxuu dhintey sheekha asagoo sheekeynaya isla markaana Quraan aqrinaya